Sachigaro weZanu PF oramba kutamiswa ne GMB - The Zimbabwean
Sachigaro weZanu PF oramba kutamiswa ne GMB
VaJohn Mafa vanove sachigaro webato reZanu PF kudunhu reMashonaland West vanoti havasi kuzotama padhepoti reGrain Marketing Board mudunhu iri vachiti vari kuitira kusimbaradza bato ravo musarudzo dzinotevera.
VaMafa avo vakanzi vatute twavo kuenda kuMashonaland Central pachinzvimbo chavo saOperation Manager nekambani yeGMB mwedzi miviri yapfuura pakuda kudzikisa huori hwakadzika midzi mukambani iyi mumwaka wekurima apo mbeu nemufudze zvakapirwa muchizivano vakati kwavari idambe kuti vabve muChinhoyi. Vachitaura nevatori venhau mudhorobha reChinhoyi vaMafa vanoti vakatoroverera hoko yavo muMashonaland West.
“Ndakanyora tsamba kuma- shefu kuGMB ndichiti hazviite kuti ini ndiri sachigaro weZanu PF ndiende kunoshandira murimwe dunhu. Parizvino ndiri mumwe wemasachigaro e Joint Monitoring Committee (Jomic) ndakamirira Zanu PF saka hazvibvire kubvuma zvakadaro”.
“Ini handiende ikoko kana zvakatsvuka seropa tisati tapinda musarudzo” vakadaro vaMafa avo vaitungamira dhepoti rakaita huori pakapirwa mbeu nemufu- dze vamwe varimi vachishaya.
VaMafa vanonzi vari kuchikwata chegurukota reku- dzivirirwa kwenyika VaEmmerson Mngagwa mumapitse ekuda kutora matomhu kana mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vasiya chigaro.
VaMngagwa vanonzi vane chikwata chiri kukwikwidzana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Joice Mujuru. VaMafa vagara vari parumananzombe nevamwe vakuru vakuru vebato ravo avo vanoti vanotsigirwa navaPhillip Chiyangwa pakuda kutonga dunhu iri.
VaChiyangwa vakabatiswa pasi apo VaMugabe vakaramba kuti vapinde muchikwata chekutungamira dunhu iro ragara rine zvikwata zvinoda hutongi.